Kenya iyo Imaaraadka Carabta oo kala saxiixday heshiisyo ganacsi - Iftiin FM
Kenya iyo Imaaraadka Carabta oo kala saxiixday heshiisyo ganacsi
by Iftiin FM Reporter February 16, 2022 February 16, 2022
Madaxeyne Uhuru Kenyatta oo safar shaqo uu aaday dalka Imaaraadka Carabta ayaa wadahadalo wax ku ool ah la yeeshay boqorka dalka Imaaraadka Carabta Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, wadahadaladasi oo ku saabsan xirriirka ganacsi ee labada dalka.
Wadahalada ganacsi ee dhex maray madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo boqorka dalka Imaaraadka Carabta Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan ayaa ka dhacay aqalka Sea Palace ee dalkasi.
75% ganacsiyada yar yar oo qarka u saaran yihiin inay burburaan.
Madaxweynaha oo maanta ka hadlayay shirka ganacsiga ee Kenya iyo Golaha Iskaashiga Khaliijka ee Dubai, ayaa sheegay in si weyn loo soo dhaweyn doono maalgashadayaasha qaybaha muhiimka ah sida beeraha, tamarta, ICT, daryeelka caafimaadka, dhaqaalaha buluugga ah, iyo adeegyada kale ee Muhiimka ah.
Suuqa Sarifka Lacagaha Qalaad.
Dhanka kale Madaxweynaha Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha (KNCCI) Richard Ngatia ayaa iftiimiyay in Kenya ay tahay marin muhiim ah oo laga galo suuqa Afrika iyadoo loo marayo heshiiska ganacsiga xorta ah ee Qaaradda Afrika (AfCFTA).
Dowladda Kenya oo daaqadda ka saari doonto mamnuuca saaraan dharka Hudheyda ah
Ngatia ayaa golaha iskaashiga khaliijka ee GCC ku booriyay in ay Malgashi ku sameyaan kenya.
Waxa uu xusay in Dekedda Mombasa ay u tahay xarun muhiim u ah gobolka oo dhan, sida dalalka aan badda lahayn ee Uganda, South Sudan, Rwanda, iyo Burundi.
Mareykanka oo Ruushka uga digay dagaalka uu kula jiro dalka Ukraine
Qofkii ugu horeeyay Kenya oo shaaciyay cudurka HIV/Aids in uu ku dhacay oo maanta geeriyooday
Kenya iyo Turkiga oo kala saxiixday heshiis ganacsi
Kenya oo horumarinaysa fursadaha ganacsiga ee caasimada Nairobi
Iftiin FM Reporter June 22, 2022
Dowladda Kenya oo ka hadashay qiimaha shidaalka
Iftiin FM Reporter June 21, 2022